MOFT Cases and Stands for iPhone sy MacBook | iPhone News
Ny fitaovana tsara indrindra ho an'ny vokatra Apple anao
louis padilla | 27/04/2022 11:34 | Fitaovana IPhone, maro
Nosedrainay ny kojakoja MOFT ho an'ny iPhone sy MacBook, mametraka izany ho fanampin'ny fanomezana fanohanana antsika hampiasa ny fitaovantsika amin'ny fomba mora kokoa, dia manana fiasa hafa izy ireo amin'ny maha-tompon-karatra azy, manarona na "tsy hita" tsotra izao.
1 kojakoja manokana
2 Mpiandry karatra sy mpihazona iPhone
3 Mijoro tsy hita maso ho an'ny MacBook
4 MacBook Case & Stand
5 Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
MOFT dia manolotra antsika kojakoja tsy mitovy amin'ny fanohanana mahazatra. Eny, omeny antsika ny fahafahana mametraka ny iPhone-ntsika eo ambony latabatra hahitana ny efijery amin'ny fomba tsara kokoa, na manandratra ny haavon'ny MacBook-ntsika izy ireo ankoatra ny fametrahana ny klavier amin'ny toerana mety kokoa amin'ny fanoratana. Fa ankoatra ireo asa izay azon'ny fanohanana mahazatra hafa omena antsika, manana zavatra manokana izy ireo izay mampiavaka azy ireo.
Ny vokatra rehetra dia vita amin'ny hoditra sentetika avo lenta. Ny fikasihana dia tena malefaka, ary sarotra ny manavaka azy amin'ny hoditra tena izy. Izy ireo dia vokatra izay nosedraina mba hanohitra ary izany dia miseho amin'ny fotoana voalohany hikasika azy amin'ny tananao. Tena mahatohitra izy ireo, mihoatra noho ny tena hoditra, ary tsy manana endrika plastika mora vidy toy ny hoditra sandoka izy ireo. Ny fanapahan-kevitra tsy hampiasa ny hoditra tena izy dia tsy fitahirizana vola, fa ny fanaovana vokatra manaja kokoa ny natiora sy mahatohitra kokoa, izay mahatanty ny fampiasana isan'andro tsy misy olana.
Amin'ny famolavolana azyary ampifandraiso amin'ny vala karazana "origami" ny andriamby mba hahazoana fototra miorina izay ahafahanao mitazona ny fitaovanao tsy misy fihozongozonana na hetsika hafa tsy mahazo aina rehefa mampiasa azy ireo. Tamin'ity fanadihadiana ity dia nanandrana fitaovana telo samihafa izahay: fanohanana magnetika ho an'ny iPhone izay mpihazona karatra ihany koa; fijoroana azo amboarina avo izay tsy hitan'ny MacBook; satroka MacBook izay mivadika ho fijoroana azo amboarina ny haavony.
Mpiandry karatra sy mpihazona iPhone
Mifanaraka amin'ny rafitra MagSafe an'ny iPhone 12 sy 13, ity mpihazona karatra hoditra vegan ity dia miraikitra amin'ny iPhone-nao Ary manao izany amin'ny alàlan'ny fanararaotana ny andriamby roa an'ny rafitra MagSafe, ny boribory ho an'ny fikojakojana bebe kokoa ary ny ambany mba hisorohana azy tsy hihodina mora. Ny gripa magnetika no andrasanao amin'ny rafitra MagSafe, ampy ny tsy hianjera rehefa mampiasa azy, fa mora ny manala azy. Ny gripa dia miasa tsara indrindra amin'ny raharaha MagSafe, satria malama be ny vera ao ambadiky ny iPhone. Izany hoe, raha nampiasa fitaovana MagSafe ianao, dia mitovy ny fitondran-tenan'ity mpihazona karatra ity.
Misy loko maromaro izy io, amin'ireto sary ireto dia ny loko Oxford Blue no hitanao. Fanamarihana ho an'ireo Mpampiasa iPhone 13 Pro: Noho ny haben'ny iPhone sy ny maody fakan-tsary, ny Windy Blue/Classic Nude/Sunset Orange/Hello Yellow dia miasa tsara indrindra. satria somary lehibe kokoa ny mpihazona karatra hafa ary ny maody fakan-tsary dia mahatonga azy ireo tsy mifanaraka tsara. Raha manana iPhone 13 Pro Max ianao, satria lehibe kokoa dia tsy misy olana.
Ny tompon'ny karatra dia manana toerana ho an'ny carte de crédit telo na kara-panondro, izay miafina tanteraka rehefa tsy miforitra ny mpihazona. Ny fampidirana sy ny fanesorana azy ireo dia tena mora, ary rehefa ao anatin'ny fonon'ny karatra izy ireo, dia saika tsy misy fitomboan'ny hateviny. Araka ny efa nolazaiko teo aloha dia tsy mipoitra izany rehefa apetrakao ao anaty paosinao, fa izaho manokana dia mampiasa azy io azo antoka kokoa miaraka amin'ny fonon'ny MagSafe, tsara kokoa ny gripa.
Ho an'ny asa fanohanana dia tsy maintsy aforeto ny mpihazona karatra izay hijanona amin'izany endrika izany noho ny fampiasana marani-tsaina ny andriamby, mampiseho ireo karatra nampianay. Afaka mametraka ny iPhone-ntsika mitsangana isika, na manodina ny fanohanana ary mametraka azy mitsivalana mba hankafizana ny votoaty multimedia na ampiasao izany amin'ny fihaonambe video. Ny fijoroany dia tena marin-toerana ary tsy misy atahorana ho lavo mora foana ny iPhone.
Mijoro tsy hita maso ho an'ny MacBook
Ny iray amin'ireo zavatra tiako indrindra amin'ny fampiasana ny solosaina eny an-dalana dia ny fisehon'ny fitendry marindrano tanteraka. Efa zatra mampiasa klavier misy fironany manokana aho, ka tsy hitako hoe ahoana no manoratra fisaka tanteraka mandritra ny ora maro. Ity fanohanan'ny MOFT ity dia eto mba hanovana zavatra satria tsy voamarika tanteraka ao amin'ny fototry ny solosainao, Ity fototra ity dia ahafahanao mitongilana ny solosainao amin'ny toerana roa raikitra, 15 na 25 degre, ary izany dia tsy vitan'ny hoe mampiakatra ny efijery ho amin'ny toerana tsara kokoa ho an'ny masonao sy ny tendanao, fa koa mampitongilana ny fitendry ho an'ny fanoratana mora kokoa.
Ny hevitra dia tena marani-tsaina: ravin-koditra vegan izay mifikitra amin'ny fototry ny solosainao, miaraka amin'ny hateviny faran'izay kely ka tsy ho hitanao akory fa mitondra azy ianao. Ny adhesive ampiasaina dia mamela azy hampiasaina imbetsaka araka izay ilaina, tsy misy tavela eo amin'ny solosainao rehefa esorinao. Tena tsotra ny fampiasana azy, ary avelanao ao anatin'ny segondra vitsy monja izany, ahafahanao misafidy eo amin'ireo zoro roa amin'ny fironana.. Amin'ny maha-fanohanana azy dia miorina tsara, ho afaka hanohana ny tananao ianao ary hanoratra tsy misy karazana vibration na fihovitrovitra eo amin'ny fotony, noho ny fisian'ny fiberglass ampiasaina amin'ny firafiny.
Rehefa tsy mila izany ianao dia ho hadino tanteraka fa mitondra azy ianao, ary afaka manohy mampiasa ilay kitapo mitondra anao ianao, satria zara raha manampy ny hatevin'ny solosainao izany. Mifanaraka amin'ny solosaina finday hatramin'ny 15,6″, na dia nanandrana azy tamin'ny MacBook Pro 16″ aza aho ary miasa tsara.. Ny sary hitanao sy ao amin'ny horonan-tsary dia nampiasa ny MacBook Air aho, izay tena tsy misy dikany. Raha naharesy lahatra ny vadiko, izay nisalasala be tamin’ny voalohany, dia azoko antoka fa haharesy lahatra anareo rehetra izany. Izy io dia misy amin'ny loko maro, malina toy ny mainty na volondavenona, manaitra toy ny voasary na mavokely, sy ny maro hafa.
MacBook Case & Stand
Avelako ho farany ny fitaovana tiako indrindra amin'ireo telo ireo: ny tanako ho an'ny MacBook Pro 16″ izay miasa toy ny fijoroana azo amboarina ihany koa. Ity vokatra ity dia mamaha olana maro amin'ny fotoana iray. Amin'ny lafiny iray, tranga tena tsara izy io miaraka amin'ny fikasihana tena mahafinaritra ahafahana mitondra ny solosainako na aiza na aiza ivelan'ny kitapoko. Mamela ahy hampiakatra ny écran laptop ihany koa izy io mba tsy hijaly ny tenda rehefa mampiasa azy eo ambony latabatra mandritra ny ora maro ianao ary mamela ahy hitendry mora kokoa. Ary raha tsy ampy izany, dia manana toerana hitondrana ny charger sy ny tariby, ary koa ny fitoeran-karatra izay azo ampiasaina foana.
Misy loko isan-karazany sy habe roa ny fonony. Ny 14″ iray dia ho an'ny MacBook 13 sy 14-inch, raha ny 14″ kosa dia, araka ny voalaza ao amin'ny tranokala ofisialy, ho an'ny modely 15″. Efa nanandrana azy tamin'ny MacBook Pro 16″ (2021) aho ary tsy misy olana, rariny nefa mifanentana tsara. Manana paosy anatiny izy io mba hampidirana ny charger laptop sy ny tariby, izay mifanentana tsara noho ny ampahany elastika amin'ny fonony. Ny mpihazona karatra kely ao anatiny dia manana toerana ho an'ny carte de crédit na ID miasa.
Amin'ny maha-fanohanana azy dia mamela toerana roa ianao, miaraka amin'ny fironany 15 sy 25º. Tsy maintsy miaiky aho fa amin'ny lafiny aesthetika dia tiako ny fomba fijery tsara kokoa ny fanohanana "tsy hita maso", fa ity manao ny asa ihany koa, tena mafy orina sy mora aforitra sy mivelatra. Raha ampidirintsika ho toy ny fonony ny asany, dia ho ahy izy io no fitaovana tonga lafatra ho an'ny solosaina finday.
MOFT dia manolotra antsika fanohanana telo tsy mitovy amin'ny hafa. Miaraka amin'ny akora sentetika izay mitovitovy amin'ny hoditra ary manana endrika faran'izay tsara., ny mpihazona iPhone MagSafe, ny fitazonana solosaina tsy hita maso ary ny tanany solosaina finday dia tonga lafatra amin'ny fananana fanohanana tsy azonao foana rehefa lavitra ny trano ianao. Azonao atao ny mahita azy ireo ao amin'ny tranokala ofisialin'ny MOFT:
Mpanohana karatra-MagSafe ho an'ny iPhone amin'ny €28 (rohy)
Fijoroana solosaina tsy hita maso amin'ny €23 (rohy)
14 na 16 ″ fanohanan-tanana finday ho an'ny €50 (rohy)
€23 a €50
Fanohanana MOFT ho an'ny iPhone sy MacBook
Famerenana ny: louis padilla
Navoaka tamin'ny: 27 Aprily 2022
Fanovana farany: 27 Aprily 2022
Kalitaon'ny fitaovana sy ny famaranana
Stable sy portable
fiasan'ny mpihazona karatra
Ny fanohanan'ny MagSafe ho an'ny iPhone 13 amin'ny modely sasany dia manelingelina ny maody fakantsary
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Ny fitaovana tsara indrindra ho an'ny vokatra Apple anao
Ity foto-kevitra ity dia mampiseho ny endriky ny fampiharana Weather ao amin'ny iPadOS
Podcast 13x29: Cupertino sy vaovao hafa amin'ny herinandro ity